जब कृषि | USAHello | USAHello
संयुक्त राज्य अमेरिका माछा र वन्यजन्तु सेवा छविको प्रतिलिपि
कृषि जब कृषि काम को सबै प्रकार समावेश. खेती खेत बाली र कामदारहरूलाई जनावर हुर्काउन छन् र खेत उत्पादनहरु खाद्य गर्न खोल्दै हुनुहुन्छ. अमेरिकी कृषि आप्रवासी निर्भर छ. यो राष्ट्रको खाना सबै को उत्पादन मा शरणार्थी र प्रवासिहरु मद्दत गर्छ.
शायद तपाईं कृषि क्षेत्रमा एक पृष्ठभूमि छ र तपाईं एक खेत मा काम गर्न चाहनुहुन्छ. शायद तिमी कृषि पेशामा मा प्रशिक्षण गर्न चाहनुहुन्छ. कृषि जब को विभिन्न प्रकार र कसरी सुरु गर्न पढ्न.
सानो फारमहरु – यो धेरै सानो फारमहरु जैविक खाद्य पदार्थ वा विशेष उत्पादन. संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नै खेत मा सुरु काम र लगानीको धेरै आवश्यक.
Farmhand – संग काम संग जनावर वा बाली ठूलो फारमहरु मा खेत कामदारहरूको.
मासु पैकिंग मिसिन – कारखाना-जस्तो वातावरणमा जनावर र मासु पैकिंग को वध काम. स्वास्थ्य बीमा र अन्य कृषि जब प्रदान गर्न. धेरै शरणार्थी मासु बिरुवाहरु परिचालन गर्न प्रयोग गरिन्छ.
मौसमी कामदार – मौसमी कामदारहरूलाई अक्सर आप्रवासी बाली बाली मौसम Alzraah.ihsdon बिरुवाहरु, सामा, पानी, प्याकेजिङ्ग र लोड यो बाली सिजन पछि संयुक्त राज्य अमेरिका वरिपरि यात्रा. को मौसमी कामदारहरूलाई अधिकांश (यसलाई कानुनी रूपमा बाध्य छ) र काम अवस्था खराब.
भित्री-शहर परियोजनाहरू – त्यहाँ धेरै स्वयंसेवक अवसर र शहर फारमहरु र समुदाय उद्यान केही भुक्तानी स्थितिहरू छन्.
कृषि मशीनरी संचालक – ठूलो उपकरण थप प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण गर्न खेत आवश्यक को संचालक, तर तिनीहरूले यसको आवश्यकता र अक्सर तिनीहरूलाई अन्य खेत कार्यकर्ता भन्दा राम्रो तिर्न.
सरकार निरीक्षक – निरीक्षकों खाद्यान्नलाई र जनावर राम्ररी उठाएको हो भनेर पक्का agronomists बनाउन र स्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरण को नियमहरु पालना.
खेत प्रबन्धक वा खेत पर्यवेक्षक – खेत श्रमिकहरुलाई खेत बाट यात्रा गर्ने कृषि कामदारहरूको को प्रबन्धकहरू, विशेष गरी प्रवासी श्रमिकहरुलाई निरीक्षण.
कृषि व्यवसाय – कृषि व्यवसाय पक्ष को कार्य बिक्री र अन्य समर्थन उद्योग सहित समावेश. यी कार्यहरु थप व्यवस्थापन स्थितिहरू प्रदान.
वैज्ञानिकहरूले – कृषि विज्ञान माटो विज्ञान र प्लान्ट जेनेटिक्स समावेश.
कृषि जब मेरो लागि उपयुक्त हो?
कृषि कठिन शारीरिक काम हो. यो खेत कार्यकर्ता र शक्तिशाली जनावर संग काम गर्ने मान्छे हुनुपर्छ. धेरै कृषि जब पनि मिसिन प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले यसलाई मिसिन संग राम्रो काम गर्ने कसैलाई राम्रो काम छ. तपाईं विदेश, कृषि सुट को कार्य काम गर्न चाहनुहुन्छ भने. तर जोखिममा फारमहरु काम, र तपाईं मिसिन, रसायन र पशु होसियार हुनुपर्छ. तपाईं आफ्नो जिम्मेवारी उठयो गर्न सक्षम छन् भने, खेत प्रबन्धक वा पर्यवेक्षक देखि तपाईं को लागि उपयुक्त हुन सक्छ. दुई भाषामा बोल्न खेत कार्यकर्ता निर्देशक ठूलो रकम छ.
कृषि जब मध्य-पश्चिम र दक्षिण मा क्यालिफोर्निया, टेक्सास र केही राज्य अमेरिका मा अर्थव्यवस्था को एक ठूलो भाग हो. डेयरी र फल उद्योग, तरकारी र मासु सधैं खेत कार्यकर्ता गर्न आवश्यक. तिनीहरूले सामान्यतया विशेषज्ञता वा माध्यमिक शिक्षा माग छैन. किसान वा खेत प्रबन्धक Ptdrebk हुनेछ. तर यी जब एक राम्रो तलब हो. थप सबै खेत कार्यकर्ता को आधा भन्दा कुनै पनि कागजातनगरिएकोत्रुटि तिनीहरूले कानुनी कागजात छैन कृषि अमेरिकी विभाग, अनुसार.
यसलाई अन्य कृषि व्यवसाय शिक्षा र केही प्रशिक्षण आवश्यक हुन सक्छ. सरकार जब यस्तो कृषि निरीक्षक रूपमा आवश्यक, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त अमेरिकी नागरिकता परीक्षा लागि निःशुल्क पाठ अनलाइन
तपाईं नजिकै कृषि बाँध्न खोज्न
कृषिमा खेत पाठ को धेरै संग क्षेत्रमा सामुदायिक कलेजहरु. जो दुई वर्ष एसोसिएट डिग्री प्रदान गर्दछ. तपाईं पशु विज्ञान, कृषि विज्ञान वा जीव मा एक एसोसिएट डिग्री प्राप्त गर्न सक्छन्. कृषि व्यवसाय मा काम गर्न, वा के तपाईं व्यापार सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले पनि व्यापार कौशल आवश्यक. त्यहाँ सामुदायिक कलेजहरु मा धेरै व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो. तपाईं नजिकै एक समुदाय कलेज खोजी
कर्नेल विश्वविद्यालयमा सानो फारमहरु कार्यक्रमबाट अनलाइन पाठ्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि सुरक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र को सुरक्षा भिडियो क्लिप हेर्न
नयाँ अमेरिकी लागि कृषि कार्यक्रम
धेरै शरणार्थी र आप्रवासी कृषि को ज्ञान संग अमेरिका आउन. संयुक्त राज्य अमेरिका भर, तपाईं कार्यक्रम समर्थन पाउन वा शरणार्थी गर्न किसानहरु तालिम वा रोजगार गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ तिनीहरूलाई केही छन्:
क्यालिफोर्निया: नयाँ जडें
Georgia: संसारको किसान
हवाई: कृषि कोन्या Incubator
इढहो: विश्व पार्कहरू
इलिनोइस: शरणार्थीका लागि विश्व पार्क प्रशिक्षण कार्यक्रम
maine: नयाँ अमेरिकी सतत कृषि परियोजना (NASAP)
न्यूयोर्क: शरणार्थी लागि Cyrkios कृषि साझेदारी
मैसाचुसेट्स: दिगो प्रवेश गर्न नयाँ कृषि परियोजना
मिसौरी: विश्व फार्महरु लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान
टेनेसी: सँगै बढ्न
टेक्सास: प्रत्यारोपण अगाडि
वरमोंट: नयाँ अमेरिकी लागि नयाँ फारम
भर्जिनिया: नयाँ जडें
वरमोंट मा शरणार्थी को रोपण को लागि एक भिडियो कार्यक्रम हेर्न
छ तपाईं GED गर्न आवश्यक?
استخدم مراكز التوظيف: सरकार रोजगार केन्द्र मुक्त. सल्लाह प्रदान गर्न र स्थानीय जब सूची राख्न. तिनीहरूले CVS र काम को प्रकारका मदत छन्. प्रशिक्षण तपाईं काम र शिक्षा लिन सक्छ. तपाईं निकटतम रोजगार केन्द्र खोज्न
अनलाइन खोज: Aghres यो कृषि जब को भर्ती लागि साइट हो
को रोशनी अन्तर्गत
मौरिस Ajabulo, नयाँ बाली फारम जर्सी विश्व कम्पनी को मालिक संग साक्षात्कार
मा 2002 , मौरिस Gpoulo लाइबेरिया देखि शरणार्थी रूपमा दक्षिणी नयाँ जर्सी सारियो. आज, उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ के गरिरहेको छ – मनपर्ने तरकारी बाली खेती आफ्नो पैतृक देखि छ.
व्यापार किसान सँगै व्यापार निर्माण